KR209 Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို, Wiegand, RS232, RS485, ABA format နဲ့ output ကို
အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ် Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို ABA format နဲ့ output ကို, Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို RS232 format နဲ့, Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို RS485 format နဲ့, Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို Wiegand format နဲ့, KR209 Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို
EM4102 နှင့်သဟဇာတ ID ကိုကဒ်ကိုဖတ် customizable နိုင်သလား, Mifare 1k S50 နှင့်လိုက်ဖက်မှု IC ကဒ်
ကဒ်အမျိုးအစားများကို Read: EM4102 နှင့်သဟဇာတ ID ကိုကဒ်, Mifare 1k S50 နှင့်လိုက်ဖက်မှု IC ကဒ်
output format နဲ့: Wiegand 26 နည်းနည်း (default အနေနဲ့ထွက်ရှိ), Wiegand 34 နည်းနည်း (မီးခိုးရောင်ဝါယာကြိုးဆက်သွယ်မှု WG34 output ကိုဖွစျလာနိုငျ)
အကွာအဝေးကိုဖတ်ပါ: 5~ 10cm
အလုပ်လုပ်အကြိမ်ရေ: 125kHz / 13.56MHz
ကဒ်ကြားကာလ Read: < 0.5s ကို
အလုပ်လုပ်ဗို့: 9V ~ 16V DC က (DC က 12V သုံးပြီးအကြံပြု)
static လက်ရှိ: < 35ma
dynamic လက်ရှိ: < 70ma
extension interface ကို: extensible RS485 / RS232 / ABA output ကို format နဲ့
အလုပ်လုပ်ကိုင်သောအခြေအနေများ: အပူချိန် -25 ℃ ~ + 75 ℃, စိုထိုင်းဆ 10% ~ 90%
built-in စပီကာ: ဉသြသံ
ရေစိုခံခြင်းနှင့် dustproof: ဟုတ်ကဲ့
built-in အင်တင်နာ: ဟုတ်ကဲ့
over-လက်ရှိ Over-ဗို့အားကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု: ဟုတ်ကဲ့
connection အကွာအဝေး: Wiegand≤100မီတာ, RS485≤1200မီတာ, RS232 / ABA≤10မီတာ
အရောင်: အမှောင် Grey က
အရွယ်: အရှည် 124 ×အနံ 76 ×အမြင့် 23.5mm
Shell ကပစ္စည်း: PVC နှင့်အမှုန့်-ကုတ်အင်္ကျီ, အတွင်းပိုင်းအနက်ရောင်စေးကော်သွန်းလောင်းနိုင်ပါသည် (ရေစိုခံထိရောက်သော)
KR209 access ကိုကဒ်စာဖတ်သူကိုအဆင့်မြင့် RF လက်ခံ circuit ကိုဒီဇိုင်းနှင့်စက်မှု-grade ကို embedded Microcontroller တွေ၏အသုံးပြုမှုကိုထပ်မံလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါ, ထိရောက်ဒီကုဒ်ဒါ algorithm နှင့်အတူပေါင်းစပ်ဟာ 64bits Read-သာလျှင် uem4100-သဟဇာတ ID ကိုကဒ်လက်ခံမြင့်မားသော sensitivity ကိုနှင့်အတူဖြည့်စွက်ရန်, အနိမ့်သော Operating လက်ရှိ , လူပျို, DC power supply, အနိမ့်သောစျေးနှုန်း, မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်. ဉသြသံ In-built နှင့်ညွှန်ပြချက် LED, ရိုးရှင်းပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်း. လွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခြင်း, ပြီးပြည့်စုံသောလုပ်ငန်းဆောင်တာ, အသုံးပြုမှု၏ကျယ်ပြန့်, access ကိုထိန်းချုပ်မှုစနစ်များကိုအမျိုးအစားအားလုံးကိုများအတွက်စံပြဖြစ်.
သုံးဖက်မြင်ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်, EM နှင့်အတူ, Mifare optional ကိုဦးခေါင်းကိုဖတ်ရှု
လက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင် 60mA ထက်လျော့နည်း
Wiegand 26bit စံပုံစံကိုဒေတာကို output
တစ်ဦး Wiegand နှင့်တကွကြွလာ 26 Wiegand မှ 34 ပြောင်းလဲမှု.
ဝါယာကြိုးများ၏နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့အညီ, ချဲ့ RS232, RS485 output ကို.
အစိုဓာတ်နှင့် dustproof, အားလုံးချိတ်ပိတ်ဒီဇိုင်းနှင့် installation ကိုရိုးရှင်း, အိမ်ပြင်နှင့်အခြားကြမ်းတမ်းသောအခြေအနေများ installed နိုင်ပါသည်, စက်မှု wear အကြမ်းခံခြင်းမရှိ
တရုတ်အမျိုးသားရေး GB ကို / T17626.4 စံချိန်စံညွှန်းများ / IEC61000-4-4 စံလျှပ်စစ်အစာရှောင်ယာယီပေါကျကှဲကိုယ်ခံစွမ်းအားစမ်းသပ်မှုနှင့်အညီ (4000V ကို, 5kHz အမြင့်မားဆုံးစမ်းသပ်မှု parameters တွေကို).
ကဒ်ကဒ်စာဖတ်သူကိုနီးစပ်သူဖြစ်တဲ့အခါ, အနီရောင်အလင်းစိမ်းလာပါ, ပြီးတော့အနီရောင်လှည့်, အဆိုပါဉသြသံဒေတာပေးပို့ဖို့အသံ, တူညီသော ID ကိုကဒ်, နှစ်ခုဖတ်အကြားကြားကာလ 500 ထက်တိုတောင်းဖြစ်ပါတယ်, ဒေတာပို့အဘယ်သူမျှမ . ကဒ်စာဖတ်သူကိုပြီးနောက်, ID ကိုပါလျှင်, IC ကဒ်တွေကို RF ကဒ်အာရုံခံဧရိယာ၌နေဆဲဖြစ်ပါသည်, စာဖတ်သူကိုတစ်ခုခုအကြံပေးချက်များပြုကြမည်မဟုတ်, ဒေတာမပို့ကြဘူး. ကွဲပြားခြားနားသော ID ကို, တွေကို RF ကဒ် sensing ဧရိယာသို့ IC ကဒ်, ကဒ်စာဖတ်သူကိုဆက်တိုက်ဖတ်, နှင့် output ကိုဒေတာ.
ဝင်ခွင့်လက်မှတ်, အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်, တက်ရောက်သူ, Charging, လုံခွုံရေး, ကင်းထောက်, အဆောက်အဦအင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေး, ယာဉ်ရပ်နားစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အ, လမ်းမကြီး, တဦးတည်း-card ကိုဖြေရှင်းချက်, e-commerce နဲ့အခြား RFID applications များ.
I am interested in your product KR209 Access Control Reader, Wiegand, RS232, RS485, ABA format နဲ့ output ကို
prev: KR222 Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို, Wiegand, RS232, RS485, ABA format နဲ့ output ကို
နောက်တစ်ခု: KR209G Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို, Wiegand, RS232, RS485, ABA format နဲ့ output ကို